Haddii codsigaaga magangelyada la diido - Migrationsverket
/ Haddii aad haysatid codsigaaga magangalyada la diiday
/ Haddii codsigaaga magangelyada la diido
Haddii codsigaaga magangelyada la diido
Om du får avslag på din ansökan om asyl – somaliska
Haddii codsigaaga la diido, macnaheedu waxa weeye in Guddida Socdaalka Iswiidhan aanay aqbalin in aad hayso sababo ku filan oo laguugu oggolaado in aad joogto Iswiidhan. Haddii laguu diido, waxaad leedahay labba ikhtiyaar: in aad aqbasho go’aanka oo aad noqoto, ama aad rafcaan qaadato. Haddii aad doorato in aad rafcaan qaadato, maxkamaddu waxay ka fekeri doontaa go’aanka. Xataa haddii aad doorato in aad rafcaan qaadato, waa in aad qorshaysaa noqoshadaada.
Haddii aad aqbasho go’aanka waxaad saxeexi doontaa warqad taas oo loogu yeedho bayaanka ama qancitaanka. Ka dib marka aad saxeexdo, waxaad qaadan kartaa rafcaanka oo waa in aad qorshaysaa safarkaagii dib wadankii ugu noqoshada.
Qorshee safarkaaga wadankii
Waxaad keligaa masuul ka tahay in aad qorshayso safarkaaga, helitaanka baasaboor iyo wax kasta oo kale oo aad awood ugu yeelan karto in aad ku noqoto wadankaagii ama u safarto wadan kale halkaas oo aad leedahay xaqa aad ku noolaato. Guddida Socdaalka Iswiidhan waxay ku siin kartaa taageerada oo waxay kaa caawin kartaa xidhiidhada wadankaaga ama diiwaangashiga safarkaaga. Iyaddoo ku xidhan wadan ka aad ka timid waxay noqon kartaa suuragal in aad qorshayso taageero lacageed si looga dhigo muddada hore ka dib marka aad u gaadho si fudud wadankaaga. Waydii cidda aad ku degayso wax kus aabsan “taageerada dib u degida”.
Akhri wax badan oo ku saabsan iskaa u noqoshada
Akhri wax badan oo ku saa cidda aad ka raadin karto taageerada dib u degiga
Go’aanku waxa uu joogi doona afar sanadood
Go’aanada ku saabsan diidmada caadiga ah waxa ay dhaqan gelayaan afar sanadood.
Haddii aad doorato in aad rafcaan ka qaadato macnaheedu waxa weeye in aad waydiinayso maxkamadda sharciga in ay ka fekerto go’aanka Guddida Sodaalka Iswiidhan. Haddii la go’aamiy in lagu mastaafurinayo waxaad joogi doontaa Iswiidhan marka la baadhayo rafcaankaaga. Taa beddelkeed waxaa la go’aamiyay in mastaafurintaadu isla markaaba la fulin doono, waxaad ka tegi doontaa Iswiidhan xataa haddii aad rafcaan qaadatay.
Akhri wax badan oo ku saabsan sida rafcaanka loo qaato
Akhri wax badan oo ku saabsan mastaafurintataas loo fulin doono si degdeg ah
Haddii aanad aqbalin go’aanka
Marka uu go’aanku dhaqan galo oo aanad in dheeraad ah rafcaan ka qaadan karin, (go’aanka waa uu dhaqan galay) waa in aad ka tagtaa Iswiidhan. haddi go’aankaaga mastaafurinta la caddeeyo inta ay tahay wakhtiga aad haysato ka hor ka tegitaanka Iswiidhan. Wakhtigan ka dib aday ku jirtaa in dheeraad ah ma haysanaydis xaqa meesha aad ku nooshahay mana yeelanaysid caawimo maaliyadeed oo ka timaada Guddida Socdaalka. Tan way kugu habboontahay dhammaan dadka waa wayn oo aan wada jir ula noolayn carruur ka yar 18 sanadood kuwaas oo ay masuul ka yihiin.
Guddida Socdaalka waxay sidoo kale samaysaa go’aanada ku saabsan kormeerka iyo dhowrida. Kormeerka macnahiisu waxa weeye in aad iska diiwaangeliso Guddida Socdaalka ama booliska guddaha muddo gaar ah. Haddii aad heshay go’aanka ku saabsan dhowrida waxaad ku noolaan kartaa qaybo la kiraysto marka aad sugayso mastaafurinta. Sidoo kale waxaad heli kartaa go’aanka ku saabsan ee kaa mamnuucaysa adiga in aad dib u safarto.
Haddii Guddida Socdaalka ay tahay fikirka xoogaas waa in la adeegsadaa si loo fuiiyo go’aanka, masuuliyada lagu fuliyo waxaa loo gudbyaa booliska.
Akhri wax badan oo ku saabsan haddii aanad aqbalin go’aanka
Mamnuucida in dib loo safro
Haddii aanad ku noolayn Iswiidhan wakhtiga lagu sheegay go’aankawaxaad heli kartaa mamnuucida in aad dib u safarto, taas oo macnaheedu yahay in lagaa mamnuucay in aad gasho wax ka mid ah wadamada Shanganta muddada wakhti gaar ah.
Haddii lagugu xukumo mastaafurin degdeg ah waxaad had iyo jeer heshaa mamnuucida aad dib ugu safarto.
Akhri wax badan oo ku saabsan mamnuucida aad dib ugu safarto iyo waxa aad samayn karto si aad isag ilaaliso
Akhri wax badan oo ku saabsan mastaafurinta degdega ah
Ma jirto wax dhacdooyin ah ka dib go’aanka
Haddii ay wax dhacaan sababtoo ah kaas oo aanad dib ugu noqon karin, waa in aad tan u sheegta cidda, adiga ku qaabishay. Guddida Socdaalka ka dib waxay baadhi doontaa haddii ay jiraan caqabado si loo fuliyo mastaafurinta. Tani waa in ay noqotaa macluumaad cusub, kaas oo soo baxay ka dib markii aad heshay go’aanka ku saabsan dacwadaada.
Akhri waxbadan oo ku saabsan waxa khuseeya macluumaadka cusub ka dib diidmada
Degenaanta, kaadhka bangiga iyo kaadhka LMA
Waxaad waayaysaa xaqaaga meesha aad ku noolaato iyo taageerada maaliyadeed haddii aad hesho go’aanka diidmada ama mastaafurinta iyo go’aanka uu dhaqan galayo, ama marka muddada bixitaanka aan khasabka ahayn uu dhammaaday. Tani adiga ayay kugu habboonaan doontaa haddii aad tahay qof wayn aan la noolayn qof carruur haysta oo ka yar 18 sano jir oo aad ka msauultahay.
Marka aanad in dheeraad ah haysan xaqa meesha aad ku nooshahay aanadna helayn caawimo maaliyadeed waxaad ku soo celin doontaa kaadhkaaga LMA Guddida Socdaalka. Haddii aad ka heshay kaadhka bangiga Guddida Socdaalka, waxaad ka soo saari lacagta kootada oo waxaad soo celin kaadhka. Haddii aad ku noolayd mid ka mid ah guryaha Guddida Scdaalka waad ka tegi doontaa guriga oo waxaad soo celin furayaasha.
Daryeelka caafimaad iyo dugsiga
Ilaa maanta, waxaad ka tegaysaa Iswiidhan waxaad yeelan doontaa xaq la mid ah adeegyada caafimaad sidii hore, laakiin ma heli doontida wax lacag daawooyinka ah ama daryeelka caafimaad ah, iyaddoo taasi caddahay, xaqa aad u leedahay maaliyadu wakhtigeedaa dhici doona.
Carruurtu waxay leeyihiin xaaqa ay ku tegaan dugsiga marka ay weli joogaan Iswiidhan.
Akhri wax badan oo kus aabsan carruurta iyo magangalyada
Ku laabashada iqtiyaarka ah marka codsigaaga magangalyada la diido
Haddii aad rabtid in aad ka racfaan qaadatid
Diidmada gelida oo markaas bilaabanayo
Xaaladaha cusub diidmada kadib ee codsigaaga magangalya doonka
Haddii aad nagala shaqayn waydo dib u celintaada
Mamnuucida dib u gelida
Kaalmo dhaqaale oo ku saabsan dib u dejin